Isuduwaha Isuduwaha - Geofumadas
isku duwaha Converter
Kuwani waa qaar ka mid ah ilaha ay 'Geofumadas' u leedahay soo dejin. Waxaa ku jira ka beddelaha isku-duwaha UTM ee juqraafi, jaangooyooyinka iyo darajooyinka iyadoo la adeegsanayo Excel.
Waxay u baahan yihiin lacag ku darsamaysa ka qayb qaadashada.
-Ciddooyinka Juqraafiga ah ee Isku-duwaha UTM
Moodhadhkan 'Excel' waxaad ugu rogi kartaa iskuduwaha qaab juqraafiyeed darajo, daqiiqado iyo ilbiriqsiyo iskuduwaha UTM. Eeg sida ay u shaqeyso.
[paydownloads id = »2 ″] Hadaadan haysan PayPal,
Waxaad iibsan kartaa Kaarka amaahda ama Paypal.
-HAYA Isku-duwaha Isku-duwaha Juqraafiga
Iyada oo shaxankan mawduuca ah waxaad u bedeli kartaa isku-duwaha UTM ee isuduwayaasha juqraafi. Eeg sida ay u shaqeyso.
[bixinta id = "1"] Haddii aadan haysan PayPal,
- Ku baddel Iskudhiska ilaa Decimals
Iyadoo shaxankan mawduuca ah waxaad u beddeli kartaa isku-duwayaasha laga bilaabo qaabka daqiiqad-daqiiqo illaa tobanlaha. Eeg sida ay u shaqeyso.
[bixinta id = "5"]
Haddii aadan haysan PayPal,
- Ku baddel Heerka tobanle ilaa heerka - daqiiqo - ilbiriqsi
Iyadoo shaxankan mawduuca ah waxaad isku-bedbedeli kartaa isku-duubnaanta qaabka jajab tobanle ilaa daqiiqo-daqiiqo-labaad.
Waxaa sidoo kale u dhaqmo sida wadataa UTM Converter iyo abuuraa concatenation laga soo dhaansado dhibcood iyo geesoolayaasha in AutoCAD.
Ver sida ay u shaqeyso.
[bixinta id = "9"] Haddii aadan haysan PayPal,
- UTM waxay isku duba ridaan inay u diraan Google Earth
Iyadoo mawduucan Excel uu abuuri karo fiidiyo kml oo ka socda Isku-duwaha UTM.
[bixinta id = "8"] Haddii aadan haysan PayPal,
- Isku xirnaanta juqraafiga ah ee Google Earth
Iyada oo qaab-dhismeedkani ka soo bixi karo Excel wuxuu abuurayaa fiidiyo kml oo isku-duuban qaabka juqraafi (lat / dheer).
Waxaa ka mid ah qaabka awooda lagu qeexayo sawir, macnaha sharaxaadda barta iyo qalabka dibadda.
[bixinta id = "6"]
- Tilmaamyada iyo masaafooyinka AutoCAD
Iyada oo qaab-dhismeedkan loo yaqaan 'polygon' waxaa lagu dhisay AutoCAD, laga soo bilaabo miiska muraayadaha iyo masaafada Excel.
Eeg sida ay u shaqeyso.
[bixinta id = "4"]
- Isku-duwaha Iskuduwaha Juquraafi ee qaabka jajab tobanlaha (Lat, Long, Alt) uuna isku-duubo qaabka X, Y.
Qaabkan, waxaad uga rogi kartaa xogta faylka Google Earth, qaab kml, oo lagu soo bandhigay Excel ka dibna loo beddelay isku-duwaha UTM. Waxay sidoo kale leedahay shaqeyn iyo tilmaamo loogu diro AutoCAD.
Waxaad iibsan kartaa Bixinta ama kaarka amaahda.
- UTM ama Rumbos iyo masaafo loo isticmaalo Microstation
Iyada oo qaabkan waxaad ka dhisi kartaa laga bilaabo Excel, ilaa Microstation, laga bilaabo jaantuska jiifka iyo meelaha fog ama iskuduwida UTM ee isku duubnaanta X, Y, Z.
-Ururka Isku-duwaha Isku-duwaha ee Tilmaamaha
Iyada oo qaab-dhismeedkan waxaad ku dhejin kartaa shaxda koorsada liiska iskudhacyada UTM ee miiska Excel.
[bixinta id = "3"]
Mashruuca UTM 1: 50.000
Download Waraaqaha Mesh 1: 50,000 ee UTM WGS84.